Gylfi Sigurdsson Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Gylfi Sigurdsson Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Yakapedzisira Kugadziriswa pane February 17, 2018
LB inopa Nyaya Yese yeBhoti Genius iyo inonyatsozivikanwa neNickname; "Ice Man". Our Gylfi Sigurdsson Childhood Indaba pamwe Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda zvisingazivikanwi zvishoma nezvake pamusoro pake.
Hungu, munhu wose anoziva nezvemapikisa ake anonyadzisa asi vashomanana vanofunga nezveGylfi Sigurdsson Bio iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Gylfi Sigurdsson Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Gylfi Sigurdsson akaberekwa musi we 8th weSeptember 1989 muReykjavik, Iceland. Akaberekwa nababa vake, Sigurdur Adalsteinsson, an Iceland Icelandisher.
Sigurdsson akanga achikandira bhora nokukurumidza apo aikwanisa kufamba. Akave akaumbwa mumutambi wenhabvu nababa vake uye mukoma mukuru, Olafur. Baba vavo vakatovhura imba yekuchengetera mari yechando kuitira kuti hutongi hwemwanakomana wavo muduku husavhiringidzika. Mukoma wake mukuru, Olafur aifanira kuzvidzidzisa pachake uye akaendawo kuchikoro chekudzidzisa asati agona mudzidzisi weGylfi. "Ndiri kuedza kuwana mhando yose yeVHS yandaigona kuwana uye ndikaedza kudzidza kudzidzisa mwana muduku,"
Baba vose nemukuru mukuru vakamutora pazera remakore 13 ndokumuendesa kuna Breiðablik kubva kune FH Hafnarfjörður (Iceland inoshevedza) semamiriro ezvinhu ekutamba bhora akanga ari nani ipapo. Akatorwa ikoko kuti akure.
Fífan, imba yeimba yepamusoro yakazara yakagadzirwa, yakanga ichangobva kuvakwa uye iyo ndiyo yaiva chinhu chinokosha mu Sigurðsson kusayina Breiðablik panguva ye13 chete. Sigurðsson aigara ari mutambi ane zvingave mumakore ake maduku uye simba rake rokupfuura uye kupfura rakaratidzwa kare kare pamusoro rinoti Magnús Jónsson, Sigurðsson mudzidzisi pakati pemakore e11 ne14.
"Akanga ane unyanzvi hwepamusoro apo ndakasangana naye mumakore ekutanga e14, kunyanya pakasvika kurova bhora. Vakawanda vevamwe vakomana vakanga vakanaka zvakaenzana asi kupfuura kwake uye kupfura mhando yaiva makiromita mberi, " anodaro Jonsson.
"Sigurðsson akanga, kufanana nevamwe vana vasingaverengeki pazera rake ne simba Icelandic mupfungwa, achida kuvandudza, kudzidzisa maawa akawanda, uye kuda kwake kukunda kwakanga kwakakura, chero mamiriro ezvinhu " anowedzera Jónsson.
"Nguva dzose aidzidzisa zvakanaka uye aida kukunda makwikwi ose ekudzidzira, kana iri yaiva chirango chokurova kana kuti gomba gorofu. Endai kup of kuti, he aigara achiita zvimwe zvinhu, aigara achitora chikoro muzvikoro zvebhola uye akagara kumashure mushure mekudzidzisa kwose kuita chimwe chinhu, " anodaro Jónsson.
Gylfi Sigurdsson Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Kukurira Mukurumbira
Gylfi akatanga basa rake rekuverenga nekuverenga muChirangaridzo, uye mu2010 akatengeswa kuHoffenheim iyo yaive yekutengeswa kukuru kwekuverenga.
Akavhota Muteereri weNyika kwemaviri maviri akatevera - Kuverenga mu 2009-10 uye Hoffenheim mu2010-11. Mushure memwaka wakadzoka muChirungu yeBritain ne Swansea City akabatanidza Tottenham Hotspur nokuda kwe £ 8.8 mamiriyoni, uye mu2014 vakadzokera ku Swansea sechikamu chekugoverana kwaBen Davies. Yakanga iri mushure mokumhanya kwake kunoshamisa muEuro 2016 kuti Gylfi yakawanda pakuzivikanwa kwenyika dzose, nokudaro ikava Icelandic version ye Tiger Woods.
Mushure me Euro 2016, Gylfi, mwanakomana wemurove wehove, akava mucheche wenyika mukurumbira. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Gylfi Sigurdsson Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Ndiye mukadzi ane chiyiko chemoyo waGylfi. Alexandra akakunda chikamu cha Miss World Sporty chokumanikidza Miss World muSouth Africa mu2008. Akakundawo Miss Iceland gore iroro.
Apo Alex akafamba mumugwagwa muSouth Africa makore 9 apfuura kubva panguva ino, Alexandra aiva mudzidzi wepfungwa, uyo akarondedzera mudzimai wake kunge ari kunze uye kufamba, pamwe nekuzarura zvokudya zvaaida zvaiva zvokudya zvekudya zvekudya uye yehuku. Nhasi, iye ibhizimusi uye bhizinesi blogger uyo anofunga nzira yake pasi rose.
Sezvakaitika panguva yekunyora, vese vanodikanwa vanogara upenyu hwakanyarara muMerseyside nembwa yavo, vaimbogara mu Swansea neLondon.
Gylfi Sigurdsson Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Sezvambotaurwa kare, baba vaGylfi Sigurdsson ndeve mubati wehove uyo ari pakati pezvakanakisisa munyika yake. Pasi apa Sigurdur Adalsteinsson uye mwanakomana wake anodiwa, Gylfi.
Sigurðsson akave akakomborerwa nekutsigirwa kukuru kubva kumhuri yake, izvo zvakave pachena zvakamubatsira iye pabasa rake rose. Akabva kuIceland kubatana nekuverenga paakanga achingova 15 chete, asi akatsigirwa zvakasimba nemari nemhuri yake. Nhasi, kubhadhara kwebhora kwakabhadharwa kune imwe nguva yepakati peboka remhuri.
"Ndinozviona zvakajeka sechinhu chakakosha kuti avo vaiva pedo naye vaise simba rakawanda mukumubatsira. Mukoma wake mukuru akanga akanaka zvikuru mukushanda naye on fozvinhu zvine chokuita neatball. Ndinofunga kuti amai vake nehanzvadzi yavo vave vachimubatsira nechepfungwa dzezvinhu. Ichi ndicho chikonzero chikuru chekuti pasi pano sei, " anodaro Jónsson.
Mushure mokunge Olafur, mukoma wake mukuru akaona kuti hama yake yakanga yakanaka kuenda, iye akatanga basa mugorofu.
Akanga ari goroferi anokwanisa asi kunyange kuwana chikwata kuEurope Tour hakuna kumubatira.
Gylfi Sigurdsson Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Upenyu hwehupenyu
Gylfi Sigurdsson ane chirevo chinotevera kumunhu hwake.
Strengths: Gylfi Wakavimbika, akaongorora, ane mutsa, achishanda zvakaoma zvikuru mune zvisikwa.
Kushaya simba: Dzimwe nguva, Gylfi aigona kutaura kunyara, kuzvidya mwoyo kana vamwe vaanoda. Ndiye mufananidzo uyo angasarudza kuita bhora zuva rose asina nguva yekuzvipira kunze kwekunge apindira naAlexandra.
Zvaanoda: Gylfi anoda mhuka, zvokudya zvine utano, mabhuku, zvisikwa, uye utsanana.
Zvaasingadi: Gylfi haafariri Kuramba chero ipi zvayo.
Muchidimbu, Gylfi mumwe munhu anoda kubhadhara zvinyorwa zviduku zvingave apo paanowana mirayiridzo yekudzidzisa kana mukukurukurirana.
Gylfi Sigurdsson Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Kudzoka
Imwe mukoma mukuru weIcelandic wenyika dzenyika imwechete akambova nerukudzo ruduku kubva ku2001 rinoratidzira iye zvino 12 ane makore ane makore kunze kweGoodison.
Sigurdsson anosangana pedyo nemifananidzo yakakurumbira yaDixie Dean akapfekedza Blue's one-to-one jumper iyo inotarisa zvikuru kwaari. Basa rake rinoverengwa; "Akarovedzwa kwevhiki ne Everton, akazova bhoja mukomana kuGoodison uye akazoenda na Everton kuenda kuGermany kune imwe nhangemutange."
Gylfi Sigurdsson Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Floki
Floki, chimiro chakaitwa nomutambi wechiSweden Gustaf Skarsgard mune zvakakurumbira Vikings TV series, zvinonzi ndiye muvambi weGylfi Sigurdsson nyika Iceland.
Gylfi Sigurdsson Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Akanga ari pedyo neGunner
Chokwadi chinotaurirwa! Asati atanga kuverenga, Sigurdsson akanga ari kutongwa zvombo - yeveki yekambani ye-arch-vavengi. Ndiani anoziva, Sigurdsson angadai akave ari kutamba hafu yeRussia yeNorth London yakave nemhosva. Pasinei nokushaikwa, iye achiri kuchengetedza nzvimbo yakaderera yeNorth London Club.
Gylfi Sigurdsson Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Piri kurwisa Swansea
Baba vake vaiziva zvakanakisisa. Usiku hwakatangira asati ava kuda kusanganazve nechisimba pamwe chete nevashandi vake vekare, Gylfi Sigurdsson akasarudza kuenda kumba. Iro zano raakagamuchira raikosha.
'Ndaiva nehurukuro nababa vangu, Sigurd,' mutambi we Everton akambotsanangura. 'Akati, "Chero chaunenge uchiita, usapemberera". Ndakanga ndapedza makore matatu nehafu muSseasea, ndakatamba mutambo wangu wekutanga weLigan League ikoko. Ndine ruremekedzo rukuru. Paakati haafaniri kupemberera ndakati, "Ndinoziva". Ndakanga ndisingambofi ndozviita. '
Sigurdsson akapedza kugadzira chinangwa chakanaka kuburikidza nekuputika, kurudyi-nhanho yekutsvaga yakasarudzwa kuitira chinangwa chemwedzi. Mushure mokunge aona, akawana zvakanaka mukati mekodzero yake yekurega mafungiro ake ose.
CHOKWADI KUTI: Tinovonga nekuverenga Gylfi Sigurdsson Childhood Indaba pamwe ne untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!.
Marcel Sabitzer Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Josip Ilicic Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Arkadiusz Milik Childhood Nhau uye Untold Biography Chokwadi
Teemu Pukki Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
fiamma Mbudzi 6, 2018 Pa 8: 12 pm
seti yega iyo poder sarudzai info
fiamma Mbudzi 6, 2018 Pa 8: 14 pm
Isa buena la pag
Julian Draxler Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Lasse Schone Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts